warkii.com » Al-Shabaab oo khasaare culus uu ka soo gaaray weerar ay ku qaadeen Awdiinle
Baydhaba (warkii.com) – Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar ay dagaalamayaasha Al-Shabaab galabta ku qaadeen deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay.
Maamulka degaanka Awdiinle ayaa guulo ka sheegtay weerarkaas ay Al-Shabaab ku soo qaadeen, iyaga oo sheegay inay ka dileen dhowr dagaalyahan, kuwo kalena ay ka dhaawaceen.
Guddoomiyaha deegaanka Awdiinle ee gobolka Bay Ibraahim Maxamed Nuur ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaanka, isla markaana ay ka dileen shan dagaalame ugu yaraan lix kalena ay dhaawacyo ku qaateen.
Sidoo kale guddoomiyaha Awdiinle waxa uu sheegay in magaalada xilliga lasoo weerarayey ay ku sugnaayeen ciidamo isugu jira kuwa xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Konnfur Galbeed oo sida uu sheegay ku guuleystay inay fashiliyaan weerarkaas ay Al-Shabaab ku soo qaadeen deegaanka.
Dadka ku nool deegaanka Awdiinle ee weerarkaasi uu ka dhacay ayaa iyaguna warbaahinta u sheegay in maamulka iyo saraakiisha ciidamada ay gudaha magaalada kusoo bandhigeen meydadka xubnihii Al-Shabaab looga dilay weerarka ay ku soo qaadeen deegaanka.
Al-Shabaab ayaa mararka qaar weerarro toos ah ku qaada qaar ka mid ah deeganada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo meelo badan ay uga suganyihiin, hasa yeeshee inta badan waxay iska cabin xoog leh kala kulmaan ciidamada ammaanka.